Archive du 20170424
Claudine Razaimamonjy Tsy ho eny Antanimora mihitsy ?
Manjavozavo ny raharaha Claudine Razaimamonjy. Tafaverina eto Madagasikara ny sabotsy 22 aprily teo ity mpandraharaha mpanefoefo ity ary naiditra hopitaly etsy amin�ny HJRA Ampefiloha indray.
Leader Fanilo Jean Max Rakotomamonjy no filoha ara-dal�na
Manamafy ary manizingizina ny avy ao amin�ny birao nasionalin�ny antoko Leader Fanilo fa fisandohana nyanaran�ny antoko no ataon�izay olona miteny etsy sy eroa ka tsy nahazo fankatoavana avy amin�ny filoha nasionaly Jean Max Rakotomamonjy sy ny birao nasionaly.Efa mazava ny taratasy hoy izy ireo ka tsy tokony asiana adihevitra be intsony ;
Praiminisitra Solonandrasana �Aoka tsy hifanoso-potaka�
Nampiaka-peo ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier ny faran�ny herinandro lasa teo fa aleo ny fitsarana hanao ny asany, ary aoka tsy hifanoso-potaka amin�ny zavatra tsy misy porofo.
Tanoran�ny DISTIM Toamasina I Ravalomanana ho filoha no tanjona
Nanao ny fifampiarahabany noho ny taona vaovao tao amin�ny foiben�ny Tiako I Madagasikara ao Ambodisoanambo, ireo tanoran�ny Distrika Tim (Dist-Tim) Toamasina I, izay notarihan�ny mpandrindra azy ireo, Raharivelo Jerry sy Razanadrakoto Tokiniaina.
Minisitra tsy mety voadaka Nandoa vola hatramin�ny 4 miliara Ariary ?
Tsy nesorina tamin�ny toerany ireo minisitra maromaro voalaza fa malaza amin�ny kolikoly sy ny afera maizina.
Avoahy Cl� cl� !
Arahabaina ry Jean fa tonga soa aman-tsara ny nandrasana a ! Efa renay fa efa tonga eto i Dinina be.
Ampahateza Ambohipo Mandrahona ny hihetsika noho ny delestazy ny mponina
Mandrahona ny hihetsika noho ny delestazy lavareny iainany isan�andro ireo mponina ao amin�ny fokontany Ampahateza Ambohipo. Efa ho roa volana latsaka izy ireo izao no niaina izany, ka ora telo isan�andro raha kely no tapaka ny jiro.
KAOMININA AMPITATAFIKA Tsy hiparitaka eran'ny tan�na intsony ny fako
Tsy hiparitaka eran'ny tan�na intsony ny fako ho an'ny kaominina Ampitatafika. Nahazo traktera vaovao hisahana ny fitaomana izany isan-tan�na sy isam-bohitra izy ireo izay efa nanaovana fanandramana nanomboka ny herinandro teo.
SVFL - Fjkm Mahalavolona Nanome ra maimaimpoana hamonjena aina
Nanome ra maimaimpoana entina hanampiana ny mpiara-belona manana ny tsy salama ny �Sampana Vondrona Fototra Laika eo anivon�ny fiangonana FJKM Mahalavolona Andoharanofotsy ny sabotsy teo.
SAmpana MPAnazava sy TIly Anosipatrana Mankalaza ny faha-60 taona
Mankalaza ny faha-60 taona nijoroany ny SAMPATI ao amin�ny FJKM Anosipatrana amin�ity taona 2017 ity. Omaly alahady 23 aprily no ivon�ny fankalazana.
Samy tsy mahafeno fepetra !
Hifarana ihany ity ny taom-piasan�ny fitondrana ankehitriny. Tsy mety tafapetraka ny fampihavanana tena izy
Herinandro ho an�ny fahasalaman�ny reny sy ny zaza Hahazo tombony manokana ny vehivavy
Hotontosaina manomboka anio alatsinainy 24 Aprily manerana ny Nosy indray haharitra hefarana ny herinandro ho an�ny fahasalaman�ny reny sy ny zaza, andiany faharoa amin�ity taona 2017 ity.
Minisiteran�ny fanajariana ny tany Mizara titra sy kara-tany 15 000 isaky ny enim-bolana
Natomboka tamin�ny fametrahana ny vato fehizoro tao amin�ny Epp Todivelona Raphael Ankirihiry Toamasina I ny fanombohan�ny fanamboarana ny efitranon-tsekoly hiarahana amin�ny fanjakana japoney amin�ny alalan�ny Jica.